Ny maody maizina ao amin'ny Google Maps dia manomboka mampiseho ireo famantarana voalohany | Androidsis
Ny maody maizina ao amin'ny Google Maps dia manomboka mampiseho ireo famantarana voalohany
Hatreto amin'ity taona ity, Google dia nanavao ny ankamaroan'ny rindranasa natolony ho antsika tamin'ny alàlan'ny fampifanarahana azy ireo amin'ny maody maizimaizina, maody maizina izay efa misy amin'ny maodely Huawei sy Samsung sasany (izay nampifanaraka azy tamin'ny Android 9) ary ankehitriny From amin'ny fomba ofisialy amin'ny famoahana ny Android 10.
Na izany aza, iray amin'ireo fampiharana izay amin'izao fotoana izao mbola tsy manolotra ny maody maizimaizina dia Google Maps. Ity rindranasa ity dia manome antsika lohahevitra maizina azo ovaina izay mandeha ho azy na amin'ny tanana rehefa mizaha, fa mitazona fotsy foana ny interface. Ny famantarana farany dia milaza fa hiova izy io.
Ny famantarana voalohany fa ho tonga ny maody maizimaizina ao amin'ny Google Maps faritra sasany amin'ny fampiharana. Ny beta an'ny Google Maps dia mampiseho ampahany sasany amin'ilay fampiharana amin'ny loko maizina, indrindra ny sasany amin'ireo bokotra fitetezana. Ny antony tsy nampifanarahan'i Google ny maody maizimaizina ao amin'ny fampiharana sarintany, indray mandeha, tsy fantatsika, fa mety tsy maintsy misy antony maharesy ny tsy mbola nanaovany azy io, antony iray izay mandositra ny ankamaroantsika.
Amin'izao fotoana izao, raha te hampiasa ny Google Maps ao anaty fiara isika rehefa maizina, mampalahelo ny fahitana azon'ny masontsika, indrindra raha namboarinay ny maody maizimaizina na eo amin'ny menio sy eo amin'ireo fampiharana izay mifanaraka. Ok, raha mampavitrika ny fizotry ny fitetezana isika dia aseho maody maizina, fa ny kapoka amin'ny maso dia tsy mahafaty olona.
Matetika i Google dia tsy manampy be dia be ny rindranasa Google Maps, na dia izany aza mandray fanavaozana mitohy. Manantena aho fa tsy ho ela intsony ny maody maizina. Hihaino tsara ny famoahana azy isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny maody maizina ao amin'ny Google Maps dia manomboka mampiseho ireo famantarana voalohany
Redmi K20 sy Redmi 7 dia mahazo vaovao farany MIUI 11 any Shina
Ny fahaizan'ny HP Lovecraft sy ny horohoron-tany mampihoron-koditra dia mahatratra ny Devoly amin'ny tantaram-pitiavan'i Lovecraft